Shacabka Suudaan oo wali diidan xukunka milatariga - BBC News Somali
Shacabka Suudaan oo wali diidan xukunka milatariga
Kumannaan qof oo dibadbaxayaal ah ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan waddooyinka caasimadda dalka Suudan ee Khartoum, waxa ayna ku gacan seyreen bandow uu soo rogay golaha cusub ee milatariga ee shalay xukunka dalkaasi la wareegay.
Al Bashir: Xukuumad iyo madaxweyneyaal laguma baddalo Facebook iyo WhatsApp
Sudan oo ra'iisul wasaare yeelatay
"Maamulkani cusub waxa uu la mid yahay kii hore," ayuu yiri Sara Cabdeljaliil oo ka tirsan ururka Xirfadlayaasha reer Suudaan. "Sidaa daraadeed waxa aan ubaahanahay ayaa ah inaan si nabad ah u sii wadno dagaalka iyo kacdoonka."
"Muwaadiniintu waxaa lagula talinayaa in ay amarkaasi u hoggaansamaan sababo la xiriira amnigooda," ayuu lagu yiri qoraalkaasi, waxaana intaasi lagu daray: "Ciidamada qalabka sida iyo golaha amnigu waxay fulin doonaan waajibaadkooga ah inay ilaaliyaan nabadda iyo amniga isla markaana ay ilaaliyaan hantida iyo nolasha shacabka ."
Dadka isugu soo baxay waddooyinka Khartuum ayaa lulayay calamo, waxa ayna ku dhawaaqayeen "mar kale ha dhaco!", iyaga oo soo cusbooneysiiyay hal ku dhigyadii ay ku dhawaaqayeen markii ay ka soo horjeedeen xukunka Cumar Al-Bashiir.
Taleefishinka iyo idaacadda qaranka ayaa hakiyay barnaamijyadii caadiga ahaa ee ka bixi jiray, waxaana wasiirka gaashaandhigga Cawad Ibn Cowf uu ku dhawaaqay "in dowladdii la afgambiyay". Waxa uu sheegay in madaxweyne Al-Bashir lagu hayo "meel ammaan ah" laakiin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Ibn Cowf wuxuu sheegay in Suudaan ay dhibaato ka haysatay "maamul xumo, musuq-maasuq iyo caddaalad darro" wuxuuna ka raali galiyey shacabka "dilalka iyo rabshadihii dhacay".
Ururka xirfadleyaasha reer Suudan ee SPA ayaa sheegay in milatarigu uu ku dhawaaqay "inqilaab" sababaya mid la mid ah dhibaatadii horey u jirtay oo ah "wajiyadii iyo hay'adihii ay dadku ka soo horjeesadeen".
Ururkani ayaa markii hore sheegay in maamulka ku meel gaarka ahi aanan marnaba lagu soo darin dadkii ka midka ahaan jiray waxa uu ku tilmaamay "nidaamkii kaligii taliska ahaa".
Saraakiisha dawladda ayaa sheegay in 38 qof ay dhinteen tan iyo bishii Diseembar balse hay'adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiradu intaasi ka badan tahay.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa codsaday in arrinta lagu dhameeyo "si degenaansho iyo xasilooni ku dheehan tahay" waxaana uu ku baaqay in shacabku ay helaan wixii ay dalbanayeen oo ah dimuquraadiyad. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Jimca ah ka arrinsan doono xaaladda ka jirta dalka Suudaan.
Xoghayaha Guud ee hay'adda xaquuqul insaanka ee Amnesty International Kumi Naidoo ayaa sheegay in muddo dheer caddaaladdu lala sugayay Al-Bashiir.
"Cumar Al-Bashiir waxaa loo doon-doonayay xadgudubyadii ugu xumaa ee xuquuqda aadanaha ee dhaca xilliga haatan la joogo, waxa aanan u baahannahay inaan ugu dambeyntii aragno in la xisaabtamo" ayuu yiri Naidoo.